'Gammachuun Iid-Alfaxiir baranaa adda' - BBC News Afaan Oromoo
'Gammachuun Iid-Alfaxiir baranaa adda'
4 Waxabajjii 2019
Madda suuraa, FBC
Ayyaanni Iidal Faxiir 1, 440'n Istaadiyoom Finfinneetti bakka hordoftootni amantichaa hedduuniifi keessummoonnii affeerraan taasifameef argamanitti ganamaa qabee kabajamaa jira.
Preezidantiin Mana Maree Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haji Umaar Idriis ergaa dabarsaaniin gammachuun ayyaana kanaa waggaa waggaan deebi'e kan dhufu ta'uus ayyaanni bara kanaa gammachuu addaa qaba jedhaniiru.
Wanti gammachuu alaanaa adda godhu tokkummaanfi nageenyi haawaasa musliimaa guutuu ta'uudha jedhaniiru. Tokkummaa fi nageenya hawaasa musliimaa deebisuuf gahee Ministirri muummee Itoophiyaa bahaniifis galateefataniiru.
Miirri tokkummaafi nageenyaa Iida baraanaarratti mul'ate akka fuldurattiis fufu abdii akka qaban ammoo Kantiibaa Ittiaanaa magaalaa Finfinnee Injinaar Taakkalaa Uumaatu dubbate.
Ayyaannii kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa akka Yugandaa, Somaaliyaa, Seraaliyoon Ripaablika Dimookraatawaa Kongoofi Maalii fa'a keessatti kabajamaa jira.
Biyyoota akka Keeniyaafi kaan keessatti ammoo ayyaanich ifatti guyyaa boruu kabajama. Haata'u malee hordoftootni Amantaa Islaamaa Keeniyaa sagada addaa raawwachuun ayyanicha har'uma kabajaniiru.
Barsiisaan Amantii Islaamaa beekamaan lammii Zimbaabwee Muftii Ismaa'eel Meenk ergaa twiitara irratti gadhiisaniin guyyaa kamirrattuu Iida kabajaa, ayyaana gaarii isiniif haata'u jedhaniiru.
"Tokkummaa argame kana ammoo cimsuuf hojiin bal'aan kan hojjetamu qabudha."
Hajii Abdulaaziiz hojii tola-ooltummaafi qulqullinaa magaalaa Finfinnee keessatti hawaasni Musliimaa qoodasaa akka ba'atus dhaamaniiru.
Ayyaana Iid Alfaxir 1440 kana irratti aanga'oonni ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarsaniiru. Ministirri muummee Dooktar Abiy Ahimad, itti aanaan pireezdaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, hoggansi naannoleefi dhaabbilee adda addaa warraa ergaa hawwaasa Musliimaf dabarsan keessaati.
Dooktar Abiy hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga hiikkaa sooma Ramadaanaa Hijraa 1440ffaa; Ayyaana Iid Al Faxiiriin ittiinisin ga'e jedhaniiru.
Ityoophiyaanonni dallaa addaan isaan fageessu walirratti ijaarurra amantaa isaanii dhuunfaa dhuunfaan qabachuudhan tokkummaafi waliin ta'uun uummata cee'ee as ga'edha jedhaniiru muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad ergaa isaanitiin.
Ammas rakkoolee mudatan walooman cee'uuf waltumsaan waliin hojjechuun murteessadha jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
Madda suuraa, Waajira Kantiibaa magaalaa Finfinnee
Walitti bu'iinsi, buqqaatiin, rakkoon siyaasaafi diinagdee akkuma baatii sooma Ramadaanaa guyyaa isaanii lakkaa'anii ni xumuramu.
Soomanni Ramadaanaa cimaa ta'us, yoo xumuramu yaadannoo isaatin jabinatu baratama.
Rakkoo Ityoophiyaan keessa jirtu yoo dabarru, bara gammachuu walootti gaafa ceenu, qormaanni marti yaadannoo ta'a jedhan.
Ministiri Muummee Dr. Abiy Ahimadiifi Kantiibaa Itti-aanaa Magaalaa Finfinnee Injinar Takkalaa Uumaa dabalatee aanga'oonni ol-aanoo naannoo Istaadiyeemii Finfinnee qulqulleessaa oolan.
Akka odeeffannoo fuula Feesbuukii Waajira Ministeera Muummee irraa argannetti namoonni 2,000 ta'an naannoo Solaata Istaadiyeemii Finfinne kana irratti hirmaataniiru.
23 Caamsaa 2019
Waa'ee ayyaana Iid Al Adahaa Ustaaz Ahmaddiin Jabaliifi Haji Jawaar Mohaammad maal jedhu?
Viidiyoo, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa: Loltuu ABO hanga barsiisaa amantii-Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa
7 Caamsaa 2019
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa: Loltuu ABO irraa hanga barsiisaa amantaa
Paartiin Badhaadhinaa Oromiyaatti har'a mootummaa haaraa akka ijaaru beeksise
Keeniyaan biyya Afrikaa jalqabaa hoggansa WHO marsaa lammaffaaf Teedroos Adaanom deeggarte taate
Daqiiqaa 41 dura
"Itoophiyaatti Waxabajji 30 guyyaa dubbisaa jedhamee labsama'' Waldaa Barreessitootaa
Goollicha Dheengee waggoota 27 booda WBO keessaa bahuu fi fuulduree qabsoo isaa
21 Fuulbaana 2021
Irreechi baranaa 'akka duraanitti' nama hunda hirmaachisee kabajama - Abbaa Gadaa
14 Fuulbaana 2021
'Oromoo namni ijjeesu diina Oromooti jennee labsine' - Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo
18 Fuulbaana 2021
Sochii gamoowwan durii Finfinnee keessa jiran 'haaromsuu'fi gaaffii inni kaase
16 Fuulbaana 2021
Shamarree kororimaa, abasuudaa fi mi'eessituuwwan biroo zayita dibataatti jijjiirte
Atileet Daraaraa kophee injifannoon maraatoonii isaa akka jalaa haqamuuf sababa ta'e akkamiin godhate?
Atileetiin Itoophiyaa tokko rikoordii yemmuu cabsitu, inni tokko injifannoon isaa haqame
13 Fuulbaana 2021
Jaalala foon dheedhii qaala’insi jireenyaa dhaabuu hin dandeenye
11 Fuulbaana 2021
'Akon dhufee uummataafi aadaakoo otoo ilaalee natti tola' - Taarikuu Gaankaasii
Kaayyoon Koongireesii Oromoo Idila Addunyaa hundeessuu maalii?
Moodeelii addunyaa beekamtuun fayyadama koosmootiksiin dhaabbiin qaamashee baduu himte
Wallaga Bahaatti haleellaa raawwateen namoonni 29 ajjeefamuun gabaafame
Gamtaan Awurooppaa bilbila mobaayilaa hundaaf chaarjariin akka walfakkaataa ta'u murteesse
Volkaanoon dho'ee laavaa yaa'urraa manni tokkittiin kophaa hafuun raajii jedhame
Poolisiin ji'oota sagaliif of-wallaalee hospitaala wayita turetti hojiirraa ari'ame
Adabbiin ajjeechaaf qaama hir'isuu deebi'uuf jedhan qondaalli ol aanaa Taaliibaan